Dagaal ka dhacay Muqdisho xili doorasho lagu mashquulsan yahay | KEYDMEDIA ONLINE
Ugu yaraan saddex qof oo uu ku jiro askari boolis ah ayaa ku geeriyoodey dagaalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaal ka dhacay saakay Isgoyska Ex-control Afgooye, ee magaaladda Muqdisho.
Sida Sarkaal katirsan booliska u sheegay Keydmedia Online dagaalka ayaa qarxay kadib markii labo dhinac oo kawada tirsan Ciidamada DF ay ku murmeen lacago canshuur ah oo laga qaado gaadiidka soo gala iyo kuwa ka baxa Caasimadda.
Iska hor-imaadka ayaa saameeyay ganacsiga ka jiray aagga lagu dagaalamay, iyadoo ay jiraan dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaasta, kuwaasoo shacab u badan, waxaana la dhigay Isbitaallada Muqdisho.
Isgoyska Ex-control Afgooye waa mid saacad kasta aad u mashquul badan, maadaama ay kasoo galaan gaadiidka ka yimaada gobollada dalka, gaar ahaan Shabeellaha Hoose, Baay, Bakool, Hiiraan iyo Jubbooyinka, waxaana ku yaalla Boosteejo baabuurta laga raaco.
Dagaalka ayaa imaanaya xili madaxda dowladda ay ku mashquulsan yihiin doorashooyinka, waxaana xaaladda kala-guurka ay keentay habacsanaan dhanka amniga ah, taasoo ay ka faa'idaysato Kooxda Al-Shabaab.